Avadiho ny fandrindrana UTM amin'ny jeografika miaraka amin'i Excel - Geofumadas
Niova fo UTM mandrindra ny toerana Excel
Febroary, 2008 AutoCAD-Autodesk, Cartografia, Downloads, Google Earth / Maps
Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha dia naseho ny takelaka Excel iray handikana ny fandrindrana Geograph amin'ny UTM avy amin'ny lahatsoratr'i Gabriel Ortiz.
Masìna ianareo, hevero ny fitaovana izay manao ny dingana toy izany amin'ny mifanohitra, izany hoe manana UTM Flag (Universal Traverso Mercator) endrika sy mahalala ny faritra, ary ny ara-jeografia latitudes hanova ny halavan'ny.
Aoka isika hanomboka familiarizing ny tenantsika amin'izany: toy ny Google Earth, ny Flag ny Palacio dos Deportes any Meksika ho X = 489513.59, Y = 2,145,667.38 mihevitra fa toy ny Google Earth mampiasa Datum WGS84. (Fa izany tsy fantatrareo, mba hahita UTM mandrindra ianao ihany no fitaovana / safidy / vista3D / mampiseho Lat / ela)
Amin'ny jeografika Flag, izany dia ho Long = -8 ° -5 '-59 "Lat = 19 24 °' 18" (mba haneho ny Grid ao amin'ny Google Earth lasa "fijery / Grid»)
Manoro hevitra anao aho hahalalanao ny tenanao amin'ny fomba fijerena sy ny fahatakarana Ahoana ny fomba fiasa UTM? mba hahazo ny ankamaroan'ny fitaovana ao Excel.
Efa vitako ity takelaka ity izay mety ho tena ilaina amin'ny namana iray izay nikasa ny handefa ny angon-drakitra sasany ao amin'ny UTM amin'ny Google Earth.
1. Ahoana ny hiditra ny angona
Yellow saha hanangona ny XY Flag, ary koa ny faritra, izany dia tokony ho ampy mba hikarakara ho ohatra Meksika, miainga amin'ny faritra 16 21 mitovy Flag mba hahafahanao ho eo amin'ny faritra samy hafa.
Toy izany koa no mitranga any amin'ny Empira, tahaka ny an'i Kolombia, Ekoatera ary Brezila izay manana faritra any amin'ny faritra avaratra sy atsimo.
Ao amin'ny ampahany ambony ihany koa ny tsipika spheroid izay nahatonga ny UTM koordinate dia novokarina, tsy natao ho an'ny vokatra ny fandrindrana, fa ho an'ny koordinate entrée.
Ny maitso dia ny ara-jeografia andry Flag, ny Flag ao atsinanan'i Greenwich dia ho tsara, izay atsinanana andrefana dia ho ratsy.
3. Ahoana ny handefasana azy ireo any amin'ny Google Earth
Na dia talohan'ny nahita fomba vitsivitsy ny mandefa ny Excel hametraka ny Google Earth jeografika sy UTM, ka hijery, raha te-handefa ny UTM mandrindra AutoCAD, Ity sary Excel ity dia mamela anao hanao izany.
Eto ianao dia afaka misintona ny maodely hanovana ireo fandrindrana UTM ho Geographic.
Azonao atao ny mividy azy io carte de crédit.
Previous Post«Previous Modèle excel azo ovaina avy amin'ny Geographic Coordinates ho UTM
Next Post Te-hametraka bilaogy aho aho, iza no hanoratra?manaraka »
109 Mamaly ny "Hanova ny fandrindrana UTM ho mpandrindra ara-jeografika miaraka amin'i Excel"
Septambra, 2020 at
Jose Solorzano Pinto hoy izy:
Ny hevitra teo aloha rehetra dia tamin'ny daty taloha, ho an'ny anio septambra amin'ny taona 2020, toy izany koa ny dikan-teny toy izany, ny teknolojia amin'io fotoana io dia tsy mitovy amin'ny daty androany, mbola hanan-kery ve izy io, misy fiovana ve?
Izahay dia nandefa azy tamin'ny mailakao. Azo antoka fa nandeha tamin'ny fisie spam sasany izy.
Javier Galofre hoy izy:
Nividy ny modely aho saingy tsy nisy nidona tamiko. Azafady azafady azafady ny mandefa an'io.
tisti hoy izy:
Tamin'ity fomba ity dia vao nahita ity tranokala ity aho ary tena nahafinaritra ahy. Tsy maintsy misadin'izay ihany aho fa mahatsiaro ho tsara be.
Tsy hitako izay hampidinana azy…. 🙁 Aiza izany latabatra mahafinaritra izany?
LUIS LARA hoy izy:
Tsy hitako izay toerana tokony hampidina azy !!
Jona, 2013 ao
Afaka manome ohatra ho antsika ve ianao?
Frank hoy izy:
Tiako ho fantatra hoe maninona raha miara-miasa amin'ny kôperativa mitovy habe aho dia mifidy vokatra hafa ho ohatra
Efrain Peña Borda hoy izy:
Febroary, 2013 at
Q fandaharana ho an'ny Windows Vista na Excel Afaka mampiasa sy télécharger mba hampiova finoana ny efitrano mandrindra jeografia na viseversa, misaotra anao mialoha noho ny sainy ho amin'izany.
Jonathan Cardiel hoy izy:
Azo antoka, mihoatra noho izany.
Tiako ny hahafantatra raha toa ka afaka miova (miaraka amin'ny UTM mankany GEOGRAPHIC) miaraka amina latabatra marobe amin'ny fotoana mitovy. Maro no toy ny 1000.
Miandry ny valinteninao haingana aho, misaotra.
Tsy manana môdely hanova ny GTM ho UTM isika.
pedro luis patino hoy izy:
Tena tiako ny môdely exel ka manova ny koorda GTM TO UTM AND FORMS
Alefaso azafady ny laharan'ny kaontin'ny sanda
Ernesto hoy izy:
Septambra, 2012 at
Hi, manana ny takelaka tsara tarehy aho mba handehanana amin'ny diplaoma mankany amin'ny ambaratonga, minitra, segondra.
JOSE LUIS hoy izy:
Misaotra ry malalako, ho hitako ny endriky ny karama indrindra azoko atao.
Hello, José Luis.
Tsy misy olana, misy sombin-tsoratra ao amin'ny môdelina izay manohana azy ireo amin'ny endri-tsoratra.
Raha vantany vao nividy izany ianao dia mifandray aminay ary hilaza aminao ny fomba hanaovana izany.
Ry malala, ny tiako horesahanao ireo sary ao amin'ny MicroStation V8i, fa ny HandHeld dia maka azy ireo amin'ny ambaratonga farany LAT W89.14298 N13.71391, ary tsy maintsy atakaliko azy ireo ny XY, ilay takelaka excel dia mangataka azy ireo ao amin'ny Degree, minitra ary segondra.
Afaka manampy ahy amin'io ve ianao? Misaotra anao
Voalohany, misaotra anao noho ny tombontsoanao.
Hamarino ny zavatra tadiavinao, satria ity môderma ity dia miova avy amin'ny UTM ho an'ny geografika saingy misy ny template hafa izay azo antoka fa hanao izay tianao.
Jereo ao amin'ity rohy ity ireo endrika hafa misy.
FANONTANIANA AZO ATAO NY Excel Sheet ny hiditra mivantana DECIMAL diplaoma sy izay vola lany.
Tsia. Ny iray amin'ity lahatsoratra ity dia afaka miova avy amin'ny UTM mankany amin'ny geografika ihany.
Nefa ny iray momba ity lahatsoratra ity raha afaka manao izay tianao ianao
VICENTE DU hoy izy:
Afaka mampiasa ny takelaka ianao mba hamadihana ny coordinate geographique
Ny mpandrindra UTM ary
Gustavo Hernandez hoy izy:
Manoro ny pejinako aho, misy ny .exe mifototra amin'ny fomba fiasan'ny Gabriel Ortiz, tsy mandoa izany fa te hametraka fanehoan-kevitra kely aho, antenaiko fa manompo, miarahaba anao.
Christian hoy izy:
Douglas hoy izy:
Ahoana no ahafahako mandrindra ny koordinary UTM amin'ny koorda geografika?
Eny, ny modely dia miasa tsy misy olana
Raha mamela ohatra ho anay ianao dia afaka mandinika.
Inona avy ireo mpandrindra nandraisanao, inona ny faritra, inona ny vokatra vokarinao, firenena inona ianao ary tahinay ny mahita izay mitranga. Tsy resaka resaka fisarahana momba ny an'arivony na fanapaha-kevitra.
Fresia hoy izy:
Hi, nividy ny takelaka aho, nametraka ny koordinate hanova azy ireo saingy nandefa ahy avy tany amin'ny kaontinanta izy ireo. Angamba ho an'ny faritra, io endrika io dia mametraka faritra 15, ho an'i Shily iza no tokony hapetrako?
Aprily, 2012 at
Salama Shaviola, eto isika no namorona ny template izay mahaliana anao
Tsy misy modely amin'ny Geofumadas toy ilay tanànanao. Misy iray nefa ny ataony dia ny mihemotra, miova làlana hatramin'ny decimals
Shaviola hoy izy:
Hi, mila mila miova ny fandrindrana amin'ny ambaratongan'ny diky aho mba handrindra ny dingana, minitra ary segondra.
Martsa, 2012 ao
Azo antoka fa ny kaoidinao ary ratsy izany, satria ny latitude manomboka any Ekoatera ary rehefa tonga any El Salvador dia isa iray mihoatra ny iray tapitrisa. Zahao izy ity satria hita fa misy ny olana.
FOTSY hoy izy:
Izany dia eto amin'ity firenena ity no misy ny fahasamihafana misy halavany eo amin'ny 87 ° sy 89 ° ary ny latitude eo anelanelan'ny 13 ° sy 14 ° dia firenena amerikanina afovoany.
X = 439188.2040 sy Y = 316859.3910
Eny fa tsy ho fantatray izay holazainay. Ahoana no ahafantaranao fa tokony hanome izany?
Daty inona no nampiasanao?
Soraty eto ny kôdôrina eo amin'ny metatra, ary hitsapa ny mpanatontosa izahay mba hahitana raha tsy miraharaha ianareo.
jereo, ampiasao ny mpanova iray mandrindra iray metatra ka hatramin'ny ambaratonga ary ny valiny tokony homeko dia ny 89 ° longitude sy 13 ° latitude, nefa nanome ahy ny 89 ° sy 2 ° latitude ny fampiasana 16 faritra sy ny ilany avaratra andrefana dia mila fantatro izay ataony
RAUL MACIAS VALDEZ hoy izy:
misy dikan-teny google izay manaiky hampiditra teboka amin'ny mpandrindra UTM dia 6.2.1.6014 (beta)
Tsindrio ny rohy milaza hoe:
Na amin'ny bokotra milaza hoe "mividy izao"
Luis Gallardo hoy izy:
Tsy hitako ny fomba handefasana ny dollar 2 ary mila maika haingana aho mba handefa ny format converter.
cris hoy izy:
Misaotra betsaka anao
Manome toky, ario ny falao. Azo alaina ao izy io.
Ok ary misy ve ny fahazoana sarintanin'i Venezoelà izay milaza amiko hoe aiza no misy ny foza na zona?
REGVen WGS84 dia mitovy amin'ny UTM WGS84
Hi, manana ahiahy aho. Ny koordinary UTM dia mitovy ny REGVEN? dia mila mila mahafantatra ireo faritra ifarimbonan'i Venezoela aho, azonao atao ve ny manampy ahy amin'izany?
Amin'ny tranga sasany dia mety hiseho ny fijanonan'ny fisintonana, na ny Proxi izay mampifandray anao amin'ny fisintonana ny fampidinana azy. Na izany aza, raha mitranga izany, dia azonao atao ny manambara azy amin'ny mailaka.
Nalefan'ny mailaka ny mailaka.
heeeey mandoa ny dolara 2 ary aza avelao aho haka ny modely an-tsoratra
Inona no ataoko ?????
Miasa amin'ny faritra rehetra
Ny tiako holazaina dia ny faritra 14 na miara-miasa amin'ny lafiny rehetra
Inona no dikan'ny 14?
Manao an'izany ve ny 14?
John hoy izy:
Mankasitraka ny vaovao aho
Tsy afaka, Google Earth dia tsy manaiky fandrindrana ny endrika UTM. Ny tena mahasoa indrindra dia ny manao azy amin'ny programa GIS toy ny Microstation, gvSIG na QGis, ary avy eo aondrana any kml izy io mba hahitany azy amin'ny Google Earth.
Enrique Arizabalo hoy izy:
Hi, jereo, mahaliana ahy ny fandrindrana. Tiako ho fantatra ny fomba nametrahako koordinates utm tany google earth tany aloha.
Oktobra, 2011 ao
Salama Miguel. Momba ny fanontanianao:
-Ny mpandrindra izay asehon'ny Google Earth sy ireo izay lazainao dia hoe UTM. Ity rafitra ity dia mizara ny kaontinanta amin'ny zona 60 izay mandeha avy amin'ny tendola ka hatrany amin'ny tendro, 6 degre ny halavany tsirairay. Amin'ny lafiny Atsinanana, ny faritra tsirairay dia manana 500,000 ho toy ny meridian afovoany ary noho izany dia mitombo na mihena mandra-pahatongany any amin'ny fetin'ny faritra, koa ny koordinatera Atsinanana dia miverina isaky ny faritra tsirairay, saingy tsy ratsy mihitsy izany. Raha ny hevitry ny avaratra dia manomboka amin'ny aotra avy any amin'ny ekoatera, mankany amin'ny tsangon'ny avaratra ary any amin'ny hemisphere atsimo dia manomboka amin'ny tsanganana izy mandra-pahatongany any amin'ny ekoatera.
Ity rafitra ity dia miteraka fahasahiranana any amin'ireo firenena izay tafiditra amin'ny faritra mihoatra ny iray, raha toa ka ny Kolombia dia eo anelanelan'ny faritra 17, 18 ary 19. Ankoatr'izay, dia manana ny mampiavaka azy ny manana fizarana any amin'ny hantsana avaratra sy ny iray hafa ao amin'ny hemobe eran-tany.
Noho izany, ireo firenena dia manapa-kevitra ny hisafidy ny fiaviana diso, mba hampihenana ny fahasarotana amin'io, ka noho izany dia tsy azo atao ny mifandrindra amin'ireo izay asehon'ny Google Earth.
Mba hahatonga ny fifanakalozan-kevitra, dia manana fampahalalana toy izao ny Institiota Geographic:
Azonao atao koa ny mijery ireto rohy ireto:
Rehefa niditra tao amin'ny pejy Internet aho, satria nitady ny fampahalalana ny koordinates izay tsipiriany etsy ambany:
Eo amin'ny sarintany ao Kolombia novokarin'ny IGAC (IGAC), Map mandrindra resahina dia tsy mitovy ny sarintany Flag ny Google Earth:
Ohatra, ny sarintany Flag ao Kolombia, ny toerana iray fotsiny-tsiny ho marina atsimon'i Puerto Wilches 1021223E, 1302614N Flag ireo tsy afaka ny toerana misy ny sarintany ny Google Earth, afaka manazava izany fahasamihafana izany?
Ankoatr'izay, amin'ny tranga mahaliana, maka ny sarintany Google Earth, indrindra amin'ny departemantan'i Nariño dia tsikaritra fa ny mpandrindra izay mandeha avy any Andrefana mankany Atsinanana, raisinay ny raharaha Tumaco, hita ao amin'ny 748650 E, raha mitohy amin'ireo mpandrindra mitovy izahay mankany Atsinanana, mahavariana fa rehefa tonga any 833969E dia miova kely taty aoriana amin'ny 166030E. Mitranga ihany koa fa ao amin'ny Google Earth manomboka amin'ny ekoatera ka hatrany avaratra dia manomboka amin'ny 0.0, na izany aza amin'ny IGAC dia manana ny fandrindrana ao aminy amin'ny ekoatera.
Ho fehiny, ahoana ny fomba hanaovan'ny fiovam-po avy amin'ny mpandrindra ny IGAC mankany amin'ny Google Earth?
Misaotra anao mialoha aho noho ny fiaraha-miasa manan-danja aminao amin'ny fanazavana an'ity toe-javatra misafotofoto ity.
Pablo hoy izy:
Tena tsara fampifanarahana ny asan'ny Gabriel Ortis, dia nampiasa azy io ao amin'ny Win XP fa mifamadika ny W7 ary afaka hanohy hampiasa izany, dia tena ilaina ny mandany hevitra amin'ny KML rakitra izay mivaky toy izao Google eto an-tany, raha manome ahy mailaka Izaho maniraka fampifanarahana.
Azo antoka, avelao fotsiny ny segondra tsy misy.
Ampidiro ny anaranao ... hoy izy:
Raha tsy manana ny segondra aho dia afaka manova azy ireo ihany koa amin'ny utm ???
Oscar alvarado hoy izy:
Jolay, 2011 ao
fitaovana goavana iray hananana mitovy an'io ny famolavolana UTM ho an'ny geographies
ARNALDO SALAZAR hoy izy:
Nosedraiko taminà teboka kojakoana ao amin'ny National Cartography ao Venezoela izy io ary manome vokatra mitovy. misaotra
Javier hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ny fandraisanao anjara.
Aprily, 2011 at
Vitos, hanao ny fiovam-po mivadika, na avy amin'ny Geografie amin'ny UTM azonao jerena ity rohy Geofumadas ity
vitos hoy izy:
Novambra, 2010 at
Mila manova an'ity data ity aho 14 ° 51 ′ 16.59 »YS 90 ° 51 ′ 50.1» ho UTM
Septambra, 2010 at
Io fandraisana anjara lehibe io, dia miasa tanteraka amin'ny tranga rehetra, fa amin'ny fetran'ny fomba. Misaotra betsaka anao nizara izany tao amin'ny tranonkala.
Fiarahabana mahafinaritra !!
Andy hoy izy:
Jolay, 2010 ao
Misaotra ny fizarana ireo latabatra ireo amin'ny olona.
Tena fampiasan-tena izy ireo
Magin64 hoy izy:
1 giga Misaotra noho ny fandraisana anjara ao amin'ny bilaogy ity, mihoatra noho ny tsara, clickcidades (mamorona informatic Arahabaina !!) afaka télécharger Excel kajy ara-jeografia ny UTM, fa ny rohy omena eto tsy afaka, izany hoe UTM ara-jeografia, ny sasany toromarika manokana?. Misaotra anao.
ramirez victoire hoy izy:
Fitaovana tena tsara ...
Misy ny olona indraindray tena ratsy fanahy ary tsy tia mizara ny fahalalany fa hitako fa malala-tanana ianao ... misaotra ny fitaovanao ...
Mey, 2010 ao
Araka ity rohy ity:
Ny Google Earth dia mampiasa ny tsindry similika tsotra sy ny Datum WGS84
Arzantina dia ahitana ny faritra 18,19.20,21,22 araka ny Ity rohy ity
Mercedes hoy izy:
Tsy maintsy georeference sary ny BS. Toy ny., Arzantina tamin'ny hevitra nalaina avy amin'ny Google eto an-tany, izay misy olona mahalala ny spheroid sy ny Datum mampiasa Google Earth sy Arzantina faritra izany? ERDAS mba hanontany ahy georreferenciacion antontan-kevitra ity.
Aprily, 2010 at
Azo antoka, ao Ity rohy avy amin'i Gabriel Ortiz ity Azonao atao ny mahita ireo formulas.
Hello. Fanampiana tsara. Na izany aza, azonao atao ve ny hanome ahy ny rôbôla hanao izany amin'ny alàlan'ny kalko?
Alonso hoy izy:
Misaotra! ary fiarahabana avy any Espaina!
benancio hoy izy:
utm geografika mpandrindra mpanova
Ronald hoy izy:
Misaotra, tsara hevitra
Heveriko anareo UTM, handika ny Flag ao amin'ny Excel latabatra, milaza izay faritra ireo ary ho lasa tahaka ny well'll jeografia manana azy ao amin'ny faritra hafa, raha dia hitranga UTM any amin'ny faritra hafa, dia ento ny miovaova ny mari-pamantarana ara-jeografika sy ny fampiofanana amin'ny utm, misafidy ny faritra hafa.
Hi, manana ny angon-drakitra nalaina tao utm aho tao amin'ny faritra 16 saingy mila manova azy ireo any amin'ny faritra 15 aho manao izany
Tsy misy hadisoana eo anelanelan'ny fandrindrana ara-jeografika sy UTM iray.
Raha te-hahatakatra ny teoria hanao ny fiovam-po ianao, dia manazava izany i Gabriel Ortiz ato amin'ity lahatsoratra ity.
ramdwing hoy izy:
tena tsara ny teknika, saingy mba tiako ho fantatra ny fomba hanaovana ny fanovana, fa tsy nomerika aho fiokoana mpianatra biby famokarana stoy fianarana fiarovana ny tany sy ny rano, ny amin'izany zavatra izany aho, mangataka mba hampiseho ny kajy, ary mamaritra ny fahadisoana eo ireo roa Flag, fa tsy ahoana no fomba hanaovana azy ireo Afaka manampy ahy ve ianao? Ny tena manan-danja indrindra dia ny manitsy ny fahadisoana eo amin'ireo kôdôgrafista roa!
misaotra mialoha !!
Tsy maintsy jerena ny faritra mifandraika amin'ny Google Earth, satria mifanohitra ny faritra 17,18 sy 19 any Kolombia
Hello. Ampidiro ny tahirin-tsarin'ny fari-piadidiana ara-jeografika mba handefasana azy ireo ho any amin'ny efitrano, fa ny vokatra azoko dia tsy araka izay noheveriko. Mitaky izany fanovana izany aho ho an'ny fandrindrana any Kolombia. Inona no fiovana tokony hataoko?
Lambros hoy izy:
Salama! Miaraka amin'ny Plex.Mark! Azonao atao ny miasa miaraka amin'ny rafitra rafitrao ao amin'ny Google Earth:
Septambra, 2009 at
hellos! Olona iray no mahafantatra ny fomba ahafahako mandeha UTM mankany Geograficas (degrees) fa amin'ny isa enim-bolana, fa tsy amin'ny minitra na segondra.
Misy fitaovana mareva-doko azoko atao ve?
misaotra anao amin'ny fotoana, ary indray ny Geofumadas lehibe indray!
Geofumadas sy Gabriel Ortiz, misaotra anao noho ny tombontsoanao hanampy ny hafa! avy any Peru aho miarahaba anao ..!
GERARDO C hoy izy:
Aogositra, 2009 at
Asa tsara ATAOVY taona vitsivitsy miaraka amin'ny vaovao sy tsara indrindra izany marina tsara tarehy, manana olana ny fiovan'ny Faritany UTM na jeografika A fiaramanidina, izany hoe mila misaina saha tamin'ny AMIN'NY ASA NA LIVE fiaramanidina mifototra amin'ny Base NY FANAZAVANA HEVITRA eny amin'ny saha sy ara-batana na ara-jeografika UTM mandrindra Course SY NY MINAMANA manamarina ny vao ERROR UTM Flag, OJALA afaka manampy ahy
tontolo izao hoy izy:
Ho an'iza dia mety ho liana aho dia mamela ny adiresin'ny pejy iray ahafahanao mahazo ny coordinate geographique sy UTM amin'izay mety:
Aprily, 2009 at
Maty i UTM Flayer, ny ankamaroan'ny fandaharana Zonums dia natao tamin'izany.
Afaka manao fifampiraharahana amin'ny Excel template
Ry namako Oliva, tsy maimaim-poana mihoatra ny andro 32 ny NOD 30. Raha mitady ny pejy hividy azy ianao:
Raha te hanana Antivirus maimaim-poana izay tsy mandalo ianao dia andramo Avira
J. Oliver Garcia Rizo hoy izy:
Afaka ataonao amiko ny fankasitrahako ny hahatongavako ESET NOD 32 antivirus, ankasitrahako izany.
Misy programa UTM Flyer, mba hampandehanana ireo resadresaka ao amin'ny Google dia nomeny ahy izany, fa efa tapitra hatreto izany, afaka manampy ahy ianao ary hanome izany ho ahy, mba tsy hahafaty izany.
Any Nicaragua, miasa ao amin'ny 16 sy 17 Zone izahay, misy olona afaka manampy ahy.
Mila maka ny programa UTM Flyer aho mba hifindra avy amin'ny UTM dia mandrindra ny NAD 27 Central mankany Geografica amin'ny Google Maps
Mino aho fa midika izany: Faritra 18, x = 338552 y = 9065052 any amin'ny hantsana atsimo. Andramo izany eo amin'ny temotra. Miatrika datum ianao
mauro jimenez nartel hoy izy:
SORATY IZAO DIA TOKONY HANOTANA AN-TRANO TANY UTM HITANAO AN-TRANO ANDRIAMANITRA DATA INDRINDRA:
LITITUDE UTM 9065052
misaotra anao noho ny fanampiana ahy hanatanteraka ny asako
ny andrefana 18L0338552
Atsimo latabatra UTM 9065052
Martsa, 2009 ao
Efa nahazo mailaka avy Mario Sanchez dia milaza amintsika fa ny expedite ny asany (dia mianatra ny fitondran-tena ny ondry ka feno vilona amin'ny alalan'ny GPS-GPRS rojo) nanampy andianà latabatra mba handeha amin'ny decimal diplaoma mba sexagesimal hatrany ary izany Ny valiny dia nampidirina mivantana ao amin'ny modely geofumed izay aseho amin'ity lahatsoratra ity.
Manampy ireo formulas hafa koa izy io mba hikajiana ny elanelana eo anelanelan'ny kôlôrdia roa ary raha manana fotoana handraisanao ny koordinate dia azonao ihany koa ny fandehanana haingana.
Nihevitra izy fa angamba mety ho ilaina amin'ny olona iray izany ka nandefa azy io ary eto dia manana ny rakitra miaraka amin'ny fanovana izy ireo.
lorenia hoy izy:
Febroary, 2009 at
Hamarino ny nomerao izay angatahan'ny mpandalina Gabriel Ortiz
Fanehoan-kevitra azo antoka:
434156.35 4804758.33 102.44 (ny toerana tsirairay eo amin'ny tsipika, aloha ny X ary avy eo ny Y. The Z dia tsy mety.)
Ampiasao ny toerana tsy misy na tabilao mba hampisarahana ny coordinates X sy Y, ary eo amin'ny raharaha Z.
Raha mametraka ny takelaka ianao dia manelingelina anao izany.
JAVIER CRUZ hoy izy:
Mila miova fo aho, Y mandrindra ny coordinate UTM
Nampiditra ireo angon-drakitra ao amin'ny CARORDOGRAPHIC COORD CONVERSOR an'ny «Gabriel Ortiz» aho. nefa tsy manipy ny angon-drariny izay ampitahaina amiko.
Afaka manampy ahy ve ny olona iray?
Ny data dia manaraka: X = 622,552.17 / Y = 2,062,181.26
Ny angona haverina dia: N 64 ° 24 '46.02 ″ E
nefa tsy tonga izany rehefa miditra ao.
Ny HUSO izay miditra amiko dia: 15 mifanaraka amin'i Campeche, Mex.
Inona no ataoko ratsy?
Misaotra ny fanampiana mialoha.
Alfonso hoy izy:
Oktobra, 2008 ao
Mpandaha-teny tsara sy fomba fampianarana tsara indrindra dia misy misaotra an'io asa lehibe io. misaotra betsaka
Septambra, 2008 at
Luis Felipe hoy izy:
Izany no fomba fampianarana. azafady mba alefaso amin'ity mailaka ity. misaotra betsaka
Izany dia tsara ho an'ny mpampianatra tahaka ahy. ud. Haniraka ahy amin'ny mailaka ve ianao? Misaotra anao indrindra sy ireo faniriana tsara indrindra amin'ireo fampianarana hendry ireo.
Aprily, 2008 at
anahí, Ity lahatsoratra ity Asehoy ny ohatra nangatahinao, avy any amin'ny faritra atsimo atsimo sy Bolivia
Adriana hoy izy:
Raha ampidirinao ao amin'ny Menu / View / Grid ny faritra misy anao, raha efa nampiditra ny UTM ianao ao amin'ny Tools / Options / 3d View.
anahí hoy izy:
Asa tsara izany, manampy be dia be, fanontaniana iray ho an'i Bolivia amin'ny fanehoana ny fiovaovana miovaova UTM ao amin'ny faritra 19, 20 ary 21.
Tiako ny hanampy anao hitady ny sarimihetsika mba hampisehoana ireo mpianatra izay mandrindra ny faritra tsirairay.
Carlos Flores hoy izy:
Martsa, 2008 ao
Arahabaina, tena fitaovana tsara sy asa tsara izy io.
orestes hoy izy:
miarahaba anao voalohany noho ny asa samihafa izay ataonao amin'ny toerana faharoa amin'ny sehatry ny fanomezana ny fahalalanao 'olona hafa izay, toa ahy, tsy manana fampahalalana betsaka, mihoatra noho ny antony ampy handrosoanao vintana